नेयमार सधैं घाइते ! उपचारमै बिताए ४६९ दिन – Nepali News
Home/Nepali News/नेयमार सधैं घाइते ! उपचारमै बिताए ४६९ दिन – Nepali News
४ कात्तिक, काठमाडौं । ब्राजिलियन फुटबलर स्टार नेइमार हिजोआज फिजियो रुमसँग बढी नै घुलमिल हुन थालेका छन् । अनि, उनलाई वर्णन गर्न प्रयोग गरिने शब्दहरुमा एउटा थपिएको छ, सँधै चोटको खतरा ।
पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)का २७ वर्षीय स्ट्राइकर नेइमार फेरि घाइते भएका छन् । अबको झण्डै एक महिना उनी मैदानबाहिर हुनेछन् । अघिल्लो साता ब्राजिलले नाइजेरियासँग मैत्रिपूर्ण खेलका क्रममा उनको घुँडामा चोट लागेको थियो ।
सन् २०१७ मा बार्सिलोनाबाट २२२ मिलियन युरोमा पीएसजी गएका उनले चोटकै कारण आफूलाई अब्बल फुटबलरका रुपमा स्थापित गर्न संघर्ष गर्नुपरेको छ । ‘ट्रान्सफरमाक्र्ट’का अनुसार नेयमारले चोटका कारण पीएसजीमा मात्र ५३ खेल गुमाएका छन् । उनले बार्सिलोनामा रहँदा चार वर्षमा २९ खेल गुमाएका थिए ।
२०१३ मा सान्तोष छाडेपछिको सबै अवधि जोड्ने हो भने उनले ४६९ दिन अर्थात् एक वर्ष तीन महिना जति उपचारमै बिताएका छन् । अहिलेे फेरि घाइते भएपछि उनले ५०० दिनको खराब रेकर्ड बनाउने खतरा बढेको छ ।
२०१७-१८ को च्याम्पियन्स लिगको नकटआउट चरणमा पहिलो लेगमा रियल मड्रिडसँग ३-१ को हार व्यहोरेको पीएसजीले दोस्रो लेगमा पुनरागमन गर्न सकेन । त्यतिबेला चोटका कारण नेयमार टिममा थिएनन् । नेयमारले समूह चरणमा ६ गोल गरेका थिए तर, नकआउट चरणमा टिमका लागि चाहिएको बेला चोटका कारण खेल्न सकेनन् ।
२०१८-१९ मा त्यही कथा दोहोरियो । नेयमारले समूह चरणमा पाँच गोल गरे तर नकआउट चरणका दुबै खेल गुमाए । पीएसजी म्यानचेष्टर युनाइटेडसँग पराजित भयो ।
विश्व च्याम्पियन बन्ने सपना पुरा गर्न पीएसजीले नेयमारलाई भित्र्याएको थियो, तर ब्राजिलियन स्टारको निरन्तर चोटका कारण त्यो पुरा हुन सकेको छैन । यो सिजनको सुरुमा नेयरमाले बाचा गरेका थिए, पीसजीलाई च्याम्पियन्स लिग जिताउने । तर समूह चरणमा नै पीएसजीलाई खेलाडीहरुको चोट र खेलाडीको निलम्बनले सताएको छ । र, क्लब बर्गविरुद्ध नेयमार चोटका कारण खेल्न सक्ने छैनन् ।
समूह चरणको दुबै खेलमा नेयमार थिएनन् । यद्यपि स्टार फवार्डहरुको अनुपस्थितिमा नै टिम विजयी भएको छ ।
सल्यानमा जिप दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु, ७ घाइते – Nepali News
महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणबाट पछि हट्यो सरकार – Nepali News
नेपालले जित्यो महिला सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि – Nepali News
भारतसँग ७ विकेटले हार्‍यो नेपाल – Nepali News
बालबालिका पनि मधुमेहको जोखिममा, कसरी बच्ने ? – Nepali News
मधुमेही समाजलाई चिकित्सक पाण्डेले एक करोड सहयोग गर्ने – Nepali News
कीर्तिपुरमा पुरुषको बेवारिसे शव फेला – Nepali News
तिलोत्तमाका किसानलाई अनुदानमा गहुँको बिउ – Nepali News
‘पासवर्ड’ फिल्म बनाएको कम्पनी अब फिल्म वितरणमा – Nepali News
अमेरिकामा कुन्ता शर्मासहित ७ स्रष्टा पुरस्कृत – Nepali News
आबुधाबीमा नेपाली चित्रकलाको आकर्षण – Nepali News
डिभी परेर वडाध्यक्ष अमेरिकामा, वडा कार्यालय नेतृत्वविहीन – Nepali News
कर्णाली र प्रदेश ७ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारको ठेक्का स्मार्टबाट खोसेर टेलिकमलाई – Nepali News
लुम्बीनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर हटाउन सरकारलाई चुनौती – Nepali News
Office Assistant, Store Incharge, Assistant Accountant
Receptionist, Front Sales Officer, Marketing Officer
Marketing, Technician, Office Work